Ababukeli baqaphela kakhulu ukukhutshwa kwezinto ezithandwayo. Uninzi lwezihlandlo zanamhlanje zintanda ezithandwayo ezivela kumabhayisikobho ebantwaneni zaphela ekupheleleni ngokwenene. Iindaba ezikufutshane malunga nokudubula kwe-"shudevr" elandelayo zaxutyushwa ngokutsha kwi-intanethi, emva kokuba zonke zijoliswe kwifilimu evelele yeSoviet - ifilimu ka-1979 "iCrew" nguAlexander Mitta, apho uLeonid Filatov, uGeorgy Zhzhenov, u-Ekaterina Vasilyeva, uAlexandra Yakovleva kunye nabanye abadlali badlala.
Abadali befilimu entsha "iCrew", ngokuqinisekileyo, bayayiqonda ingozi abayithathayo, banquma ukususa ukuchazwa kwamhlanje kwi-"Famous Crew" yaseSoviet.
Mhlawumbi, ukuze bangadumiseli abaphulaphuli, kwagqitywa ukuba bameme abadlali abathandekayo basekhaya basekhaya - uDanil Kozlovsky kunye noVladimir Mashkov - kwiindima eziphambili.
Imifanekiso yefilimu entsha yagqitywa ngeenyanga ezine ezedlule, ngoFebruwari. Ngoku abadali bomfanekiso "badibanisa" ngokuhlelwa kweengxelo. Namhlanje, ekugqibeleni, abaphulaphuli banokubona i-trailer yokuqala yomfanekiso ozayo.
Umdlali oyintloko wefilimu ngu-Alexei Gushchin oyilwayo. Umfana onetalente akaqapheli iziphathamandla, okhokelwa kwizenzo zakhe ngekhowudi yakhe yokwazisa. Akumangalisi ukuba ngemigaqo yakhe uGoushchin ulahlekelwa ngumsebenzi wakhe oyintandokazi: uxoshwa kumkhosi wemikhosi. Iphupha elide elide lo-Alexei - umkhosi wezempi, wawa. Ngoku umqhubi ulungelelaniswa nabasebenzi beenqwelo zomlilo.
Kwibala, i-Guschina ayinalo ubudlelwane kunye neqela. Yonke into iya kutshintsha emva kokuba abasebenzi basebenzise yonke i-100% kwimo engqongqo. Le ntlekele iya kubumbana kunye, ngubani oya kwenza le feat.
Nangona uKozlovsky akayi kusindisa "iCrew" entsha ngokusweleka
Kufanelekile ukukhankanya ukuba abasebenzi be-"Legend No. 17" basebenze kwifilimu, ngoko kuya kwenzeka ukuba i-remake ye-"Crew" edumileyo inamathuba okuphumelela, kunye nokufumana umbukeli walo.
Nangona kunjalo, abasebenzisi ababukele i-trailer encinane, sele beshiye ukugxeka kwabo. Nazi ezinye zazo, apho kungabonakali khona amagama angabonakaliyo (ubugcisa kunye neziphumlisi zigcinwa):
Kuze kube ngoku, akukho nanye yefilimu yamaSoviet eye yagqithisa yokuqala, kwaye enye isesithandweni! Ukuxhaphaza okungenangqondo kobugcisa baseSoviet.
... kutheni ungafani nefilimu le ncwadi? Yintoni le fuck ukudubula into efanayo?
Kutheni ungafani neentlekele kwaye ungabibizi ngokuhlukile ... Ewe, kwaye ngokubanzi, oku kuya kubizwa ngendlela eyahlukileyo.
U-Anna Semenovich ususwe kwividiyo ekhulayo
U-Katya Gordon ulungele ukuthetha kunye neendoda zeendoda zabaxhasi bakhe
URenata Litvinova utshitshiswe ngeengubo zobugcisa, umfanekiso
UDaria Pynzar akayi kuqhawula umyeni wakhe
Isaladi kunye nekhukhamba kunye neselmatory
Ingaphakathi kwisitayela se-antique
Ukungazinzanga ngexesha lokukhulelwa
Yintoni enxibayo ehlobo eofisini?
Ukuhlanjululwa komzimba weesxibisi kunye neesxibisi
Indlela yokupheka ikhekhe lecookie ngaphandle kokubhaka
Iidlo zenyama kwitafile yokutya
Ukucoca ulusu lomntu ekhaya
Indlela yokuzikhusela kwiikhiza
Ukuphupha izikhonkwane zakho okanye ezinye
Iimbotyi zamadoda aseSwitzerland: izitayela eziphambili, i-Spring 2016, ifoto
Iklabishi echitshiweyo nelayisi